Tsy afaka mametaka fampiharana amin'ny iPhone X? Kitiho indroa hametrahana? The Fix! - Iphone
Ahoana ny fomba hijerena ny fampiasana bateria amin'ny iphone 6
tsy afaka mifandray amin'ny fivarotana app ny fanamboarana
maninona no tsy maneno ny findaiko rehefa misy miantso ahy
tsy afaka miantso amin'ny iphone
Tsy afaka mametaka fampiharana amin'ny iPhone X? Kitiho indroa hametrahana? The Fix!
Tsy afaka mametraka apps amin'ny iPhone X ianao ary tsy fantatrao ny antony. Milaza hoe 'Double Click to Install' eo amin'ny efijery ianao, fa tsy fantatrao izay hikitika anao! Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho asehoy anao ny fomba fametrahana fampiharana amin'ny iPhone X anao sy ny zavatra tokony hatao rehefa tsy misintona ny fampiharana !
Milaza ny iPhone X hoe 'Tsindrio indroa hametrahana'
Raha mahita ny 'Double Click to Install' amin'ny iPhone X ianao, ny sisa ataonao dia tsindrio indroa ny bokotra Side. Hampihetsika ny Face ID, izay ampiasaina hanamafisana ny fametrahana ny app.
maninona ny findaiko no mitady serivisy
Ity fifampiresahana App Store vaovao ity dia natolotra tamin'ny famoahana ny iOS 11.1.1. Mpampiasa iPhone X maro no mahita fa mampifangaro azy io satria tsy milaza mazava tsara hoe aiza no tsindrio ilay hafatra.
Atsaharo ny iPhone X
Raha tsy hitanao ny fampandrenesana 'Double Click to Install', dia mety misy olana momba ny lozisialy misakana ny Phone X anao tsy hisintona fampiharana. Miezaha hamerina ny iPhone X anao, izay ahafahan'ny programa rehetra aoriany hikatona ara-dalàna.
Mba hamonoana ny iPhone X anao dia tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra volume sy ny bokotra Side mandra-pahitanao solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho amin'ny fampisehoana. Esory ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone.
Andraso eo amin'ny 15-30 segondra, avy eo avereno miverina ny iPhone X anao amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra Side mandra-pahitanao ny sary famantarana Apple hita eo afovoan'ny fampisehoana iPhone.
Manidy ary mamoha ny App Store
Misy vintana tsy ahafahanao mametraka apps amin'ny iPhone X-nao noho ny fisintomana rindrambaiko ao amin'ny App Store. Amin'ny fanakatonana sy fanokafana ny App Store dia homenao fotoana faharoa hanokafana tsara amin'ny fotoana hanokafanao azy.
maninona ny findaiko no mamerina mamerina ny tenany
Sokafy ny mpandova fampiharana amin'ny iPhone X anao amin'ny alàlan'ny fisokafana ambony ambany ka hatrany afovoan'ny fampisehoana. Tazomy eo afovoan'ny fampisehoana ny rantsan-tànanao mandra-pahitanao ny lisitry ny fampiharana misokatra amin'ny iPhone-nao izao.
Raha hikatona eo amin'ny App Store dia kitiho sy hivoaka ny efijery. Ho fantatrao fa mihidy ny App Store rehefa tsy miseho intsony ao amin'ny mpandefa app.
Vonoy ny maody fiaramanidina
Raha ao amin'ny Airplane Mode ny iPhone X anao dia tsy ho afaka hametraka fampiharana ianao satria tsy hifandray amin'ny tamba-jotra finday na Wi-Fi ny iPhone-nao. Mba hamonoana ny Airplane Mode, sokafy ny fampiharana Settings ary vonoy ny switch eo akaikin'ny Airplane Mode. Ho fantatrao fa maty ny switch raha fotsy ary apetraka ankavia.
Ankoatr'izay, Cellular Data ihany no azonao ampiasaina handefasana fampiharana izay kely kokoa noho ny 150 MB. Azonao atao ny mahita ny haben'ny fampiharana iray amin'ny alàlan'ny fitendrena azy ao amin'ny App Store ary hikorisa mankany ambany Information menio
Zahao ny fameperana eo amin'ny iPhone X
Raha tafapetraka ao amin'ny iPhone X ny fameperana, mety ho novonoinao tsy nahy ny fametrahana apetraka amin'ny iPhone-nao. Sokafy ny fampiharana Settings ary tap General -> Famerana hiditra amin'ny Famerana ao amin'ny iPhone.
Manaraka, horosohy hidina ary alao antoka fa eo akaikiny ilay switch Mametraka Apps dia mirehitra. Ho fantatrao fa mandeha ny switch raha maintso.
Avereno ny fikirana rehetra
Raha mbola tsy afaka mametraka apps amin'ny iPhone X ianao dia mety misy olana rindrambaiko lalindalina kokoa mahatonga ilay olana. Indraindray, azontsika atao ny manafoana ireo olana momba ny rindrambaiko miafina amin'ny alàlan'ny famerenana mandefa ireo fikirana rehetra ao amin'ny iPhone X anao ary hamerina azy ireo amin'ny hadisoan'ny orinasa.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenanao ny fikirana rehetra dia alao antoka fa manoratra ny teny miafinao Wi-Fi ianao. Mila mifandray indray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao rehefa vita ny famerenana .
Mandehana amin'ny fampiharana Settings ary tap General -> Reset -> Avereno ny fikirana rehetra . Ampidiro ny kaody passcode iPhone anao, avy eo paompy Reset All Settings aorian'ny fisandratana fanamafisana mipoitra eo amin'ny efijery. Ny iPhone X dia hiverina indray aorian'ny famerenany ny fikirana.
fa maninona no mafana be ny iphone 7-ko
Fampiharana, fampiharana, fampiharana
Namboarinao ny olana amin'ny iPhone X anao ary afaka manomboka mametraka fampiharana vaovao ianao! Manantena izahay fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy ianao mba hampisehoana amin'ny namanao ny dikan'ny hoe 'Double Click to Install' ary hanampy azy ireo rehefa tsy afaka mametaka fampiharana amin'ny iPhone X. Raha manana fanontaniana hafa ianao dia aza misalasala miala izy ireo eto ambany ao amin'ny faritra maneho hevitra.